इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्राफिक डिजाइनर | अनलाइन क्रिएटिभहरू
इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्राफिक डिजाइनरहरू
मेरी गुलाब | | धेरै
La आयात गर्नुहोस्ancia de को बताउनñadअयस्स् gráficosalo ठूलोo de la इतिहासकारia de la मानवidad es tan महान्e que छोरा una de Las प्राध्यापकesआयनes que no हुनían स्थानआईबल्स पाप ellos. डिजाइन को कला आजको संस्कृति मा एक प्रमुख प्रभाव छ.
इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्राफिक डिजाइनरहरूको बारेमा अलि बढी जान्नु र जान्नु आवश्यक छ जब यो सिर्जना र डिजाइन गर्न सन्दर्भहरू लिने कुरा आउँछ, किनकि अधिकांश कलाकारहरू तिनीहरूबाट प्रेरित भएका छन्। यहाँ हामी तपाईंलाई तिनीहरूको बारेमा थोरै बताउँछौं।
1 इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्राफिक डिजाइनरहरू
1.1 शाउल बास
1.2 मिल्टन ग्रेजर
1.3 पाउला स्सर
1.4 पल रान्ड
1.5 डेभिड कार्सन
1.6 डेबोरा सुसमान
1.7 एलेक्स ट्रोचुट
Instagram इन्स्टाग्राम डिजाइनरहरू प्रेरणाको लागि अनुसरण गर्न
हामीले सात ग्राफिक डिजाइनरहरूको चयन गरेका छौं जसले हाल आफ्नो डिजाइनको साथ आजको समाजमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यहाँ हामी तपाईंलाई तिनीहरूको बारेमा थोरै बताउँछौं।
Sऔल बास fue un ilUstरडार y बताउनñपूजा गर्नु gráfIČO Estadऔनidnape, Famoso द्वारा su trabलसुन con el cसंयुक्त राज्य अमेरिकाका केही महत्त्वपूर्ण कर्पोरेट पहिचानहरूको ine र डिजाइन. फेब्रुअरी 8, 1920 मा न्यू हेभन, कनेक्टिकटमा जन्मे र अप्रिल 25, 1996 मा लस एन्जलस, क्यालिफोर्नियामा मृत्यु भयो।
उनको प्रारम्भिक काममा अल्फ्रेड हिचकक, द म्यान विथ द गोल्डेन आर्म, र द गर्ल कान्ट हेल्प इटका लागि चलचित्र पोस्टरहरू डिजाइन गर्ने समावेश थियो। उनी जस्ता ब्रान्डहरूका लागि एक प्रमुख व्यावसायिक ग्राफिक डिजाइनर पनि थिए। Kleenex, Minolta, Warner Communications, वा AT&T.
स्रोत: मिल्टन ग्लेजर
मिल्टन ग्लेजर एक अमेरिकी चित्रकार र डिजाइनर थिए जो रेकर्ड र पुस्तकहरूको लागि आफ्नो डिजाइनका लागि परिचित थिए। उनी पुशपिन स्टुडियोका सह-संस्थापक थिए। उनले न्यूयोर्क पत्रिकाको स्थापना गरे। उनले प्रसिद्ध बब डिलन, रेकर्ड डिजाइन, सम्पादकीय डिजाइन र कर्पोरेट पहिचान सहित पोस्टरहरूको डिजाइनमा आफूलाई समर्पित गरे। उनले ला भ्यानगार्डिया जस्ता अखबारहरू पनि पुन: डिजाइन गरे। उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध डिजाइनहरू मध्ये एक I Love New York लोगो थियो। उनले पेरिस म्याच, ल'एक्सप्रेस, एस्क्वायर वा भिलेज भ्वाइस जस्ता प्रकाशनहरूको लागि काम गरे। नेशनल मेडल अफ आर्ट्स अवार्ड प्राप्त गर्ने उनी पहिलो ग्राफिक डिजाइनर थिए।
उनको शैलीको लागि हामी भन्न सक्छौं कि उहाँ धेरै बहुमुखी हुनुहुन्छ। मिल्टन ग्लासर एकल भिजुअल टुक्रामा थोरै तत्वहरू, धेरै संख्यामा अवधारणाहरू सहित सन्देशको लागि परिचित छ। यसको प्रभाव विभिन्न भ्यानगार्डहरू र प्रविधिहरूबाट आउँछ, जहाँ पाठ र छवि एकसाथ आउँछन्।
पावललेa Scher es una डिजाइनहरु कोñadविश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध अमेरिकी ग्राफिक कला। उनले एल्किन्स पार्कको टायलर स्कूल अफ आर्टमा पेन्सिलभेनियामा ललित कलाको अध्ययन गरे। उनी डिजाइन एजेन्सी पेन्टाग्रामको पहिलो निर्देशक थिइन्, जसमा उनी सन् १९९१ मा सामेल भए । लागि काम गरेको छ ग्राहकes como चार्ल्स Bronson, कोका कोला, शेक शेक, पेरी एलिस, आधुनिक कला संग्रहालय, यो नयाँ यॉर्कर, Windows अरूको बीचमा।
80 को दशकमा, उनले आर्ट डेको र रूसी रचनावादबाट प्रेरित भएको आफ्नै शैलीको विकास गरे। उनले सहर जस्ता धेरै कर्पोरेट पहिचानहरू उत्पादन गरेका छन्, उनले पुस्तक कभरहरू, प्याकेजिङ्ग र विज्ञापनहरू पनि डिजाइन गरेका छन्। उनको शैली धेरै विशेषता छ र Scher फन्ट संग चित्रण गर्दछ, जसको साथ उसले धेरै शक्तिशाली र नवीन छविहरू निर्माण गर्दछ।
पावलले रेंड es uno de को m.s Famosos बताउनñadअयस्स् gráficos de la इतिहासकारia. आधुनिक ग्राफिक डिजाइनका पिताको उपनाम दिएका, उनी ब्रान्ड र लोगोको डिजाइनमा विशेषज्ञ थिए, y una de Las figuras m.s महत्त्वपूर्णes को बताउनओओ gráfIČO en Estकिशोर Unidसंयुक्त राज्य अमेरिका पल रेन्डको जन्म अगस्ट १५, १९१४ मा ब्रुकलिन, न्यूयोर्कमा भएको थियो। उनले 15 मा पार्सन्स द न्यू स्कूल फर डिजाइन र 1914 मा आर्ट स्टुडेन्ट्स लीगमा अध्ययन गरे। उनी एस्क्वायर पत्रिकाका कला निर्देशक थिए। y परिधान कला-GQ द्वारा।
उनको शैलीको लागि, हामी भन्न सक्छौं कि यो टाइपोग्राफी र ज्यामितीय आकारहरूको संरक्षित प्रयोगको साथ आधुनिकतावादी हो। पॉल रान्ड जर्मन साचप्लाकट शैली र गुस्ताभ जेन्सनका कार्यहरूबाट प्रभावित थिए। उनले IBM, ABC, UPS, Enron, Next जस्ता प्रसिद्ध कम्पनीहरूको लागि कर्पोरेट पहिचान सिर्जना गरे।
स्रोत: डेभिड कार्सन
डेभिड कार्सन एक अमेरिकी ग्राफिक डिजाइनर र कला निर्देशक हो। उनी रे गन पत्रिकामा कला निर्देशक थिए। उनको जन्म टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका मा 1955 मा भएको थियो। उनको जुनून मध्ये एक सर्फिंग थियो, जहाँ उनी विश्वव्यापी नम्बर9हुन सफल भए। यो डिजाइनर को लागी परिचित छ प्रयोगात्मक टाइपोग्राफी र वैकल्पिक फोटोग्राफिक प्रविधिहरूसँग नवीनता। उनले सम्पादकीय र अडियोभिजुअल डिजाइनमा विशेषज्ञता हासिल गरे, यद्यपि उनले पोस्टर र संगीत एल्बमहरू पनि डिजाइन गरे।
उनले ग्राफिक डिजाइनर हान्स-रुडोल्फ लुट्जबाट प्रशिक्षण पनि प्राप्त गरे, जुन डिजाइनको ठूलो विविधता र टाइपोग्राफीको क्षेत्रमा उनको अध्ययनको लागि परिचित छ। कार्सनको प्रभावको अंश सर्फिङ, फोटोग्राफी, समाजशास्त्र र ग्राफिक डिजाइनको अतिरिक्त यस कलाकारबाट उत्पन्न हुन्छ।
उनी अमेरिकी डिजाइनर र वातावरणीय ग्राफिक डिजाइनको क्षेत्रमा अग्रगामी थिइन्। उनको जन्म मे २६, १९३१ मा ब्रुकलिन, न्यूयोर्कमा भएको थियो। उनले आफ्नो कलात्मक करियर न्यूयोर्कको आर्ट्स स्टुडेन्ट्स लीगमा सुरु गरे, पछि न्यु योर्कको बार्ड कलेजमा अध्ययन गरे। अन्तमा, उनले शिकागोको डिजाइन इन्स्टिच्युटमा ग्राफिक डिजाइनमा स्नातक गरे। उनले चार्ल्स र रे फेम्सको अध्ययनमा काम गरे। उनले वास्तुकला र सार्वजनिक संरचनाहरूमा ग्राफिक डिजाइन मर्ज गरे।
1968 मा, उहाँले सान्ता मोनिका मा आफ्नै स्टुडियो खोल्ने निर्णय गरे। फ्रान्क गेहरी र गेरे काभानाघ द्वारा स्थापित, यसलाई डेबोरा सुसम्यान एण्ड कम्पनी भनिन्थ्यो। त्यो अवधिमा, तिनीहरूले 340 भन्दा बढी उल्लेखनीय परियोजनाहरूमा काम गरे। उनले फिलिप जोन्सन, ओलिन र बार्टन मायर्स जस्ता आर्किटेक्टहरूसँग सहकार्य गरेका छन्। लस एन्जलसमा 1984 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको लागि लुक र वास्तुकला परिदृश्य डिजाइन गर्नु उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध परियोजनाहरू मध्ये एक थियो।
अलेक्जेन्डर ट्रोchut es uno de को बताउनñadअयस्स् gráficओएस र टाइपोग्राफिक m.s महत्त्वपूर्णes de nuप्रेरणा país. उनले बार्सिलोनाको युनिभर्सिटी स्कूल अफ डिजाइन एण्ड इन्जिनियरिङ एलिसाभामा अध्ययन गरे। कमenzó hपीडाएन्डो ilUstर्याकआयनes लागि libROS de पाठo y लागि agencias de सार्वजनिकidad. Su काररेरा se ha desarरोलहलचल en लाईdo el गणवेशo, y उनले द न्यूयोर्कर म्यागजिन, पेन्गुइन बुक्स, साक्स फिफ्थ एभिन्यू, जस्ता महत्वपूर्ण ब्रान्डका लागि काम गरेका छन्। नाइके, पेप्सी, पुमा वा द रोलिङ स्टोन्स.
उनी बार्सिलोनामा केही समय बसे जहाँ उनको डिजाइन स्टुडियो थियो, तर ब्रुकलिनमा सर्यो, जहाँ उसले ग्राहकहरूको ठूलो पोर्टफोलियोसँग काम गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्राफिक डिजाइनरहरू
नमस्ते, मलाई तपाईंको चयन रोचक लाग्छ तर यो पक्षपाती छ, तिनीहरूले अमेरिकी डिजाइनरहरूको नाम मात्र राख्छन्। र संसार अमेरिका मात्र होइन। संसारमा धेरै देशहरू छन्।
शुरुआतीहरूको लागि 3D रेखाचित्र
पोस्टरका लागि राम्रो अक्षर